Imishini yokwelashwa kwegesi eyi-Best esebenza kahle yomakhi womshini okhiqiza amandla omlilo kanye neFektri | Ukulingisa
Ukushisa komlilo kuyindlela ejwayelekile yokulwa negesi, okuyi-essence yayo i-oxidation ejulile yomoya-mpilo osebenzayo. Ngenkathi yokushisa komlilo, indima ye-catalyst ukunciphisa amandla wokwenza kusebenze, ngasikhathi sinye, indawo yokubangela inomphumela we-adsorption, okwenza ama-molecule we-reactant acebise ebusweni ukwenza ngcono isilinganiso sokuphendula nokusheshisa ukusabela. Ngosizo lwe-catalyst, i-organic waste gas ingashiswa ngaphandle kwelangabi ngaphansi kwesimo sokushisa okuphansi kokushisa, futhi ingaxutywa futhi ihlanganiswe ibe yi-CO2 ne-H2O. Ngesikhathi esifanayo, inani elikhulu lamandla okushisa lingakhishwa Ngisikhathi esifanayo. Inqubo yokusabela imi kanje:
CH + (n + m / 4) O2 → nCO2 ↑ + 2H2O ↑ + ukushisa
* Ukuhamba komsebenzi
Imishini eguquguqukayo yokutholwa yamukelwa embhedeni wokuvula amandla, futhi ukufudumeza kagesi kwamukelwa umbhede okhokhelayo. Igesi ishiswa cishe ngama-300 ℃ futhi ingena egumbini lokuthwebula. Ngaphansi kwesenzo se-catalyst, izinto eziphilayo kwigesi zibola zibe yi-CO2 H2O nezinye izinto, futhi ukushisa kukhishwa ngasikhathi sinye. Igesi lokushisa okuphezulu liyakhishwa ngemuva kokuthi ingxenye yokushisa itholwe yidivayisi yokushintshanisa ukushisa, kanye nezinga lokushisa le-
igesi ekhishiwe icishe ibe ngama-60- 70C, ekhishelwa ngqo kushimula. Usebenzisa ukushisa komlilo ukufeza ibhalansi yokushisa edingekayo ngokushisa okushisayo kanye nokususa i-desorption, ukuze kugcinwe ukusebenza kohlelo, izindleko zokusebenza zingasindiswa kahle. Uhlelo lonke lwamukela ukusebenza kwe-PLC ukulawula okuzenzakalelayo.
Isenzo se-catalytic sezinsimbi eziyigugu (i-palladium, i-platinum) sasetshenziselwa ukunciphisa izinga lokushisa kwe-oxidation yamakhemikhali e-organic aguquguqukayo abe ngu-300 degrees Celsius, Ukonga amandla kagesi.
Izici zomlilo wokuvuselela amandla
Ukushisa kokushisa okuphansi, ukonga amandla
Uma kuqhathaniswa nomlilo oqondile, amandla omlilo ahlanganisa imfucumfucu kagesi anezici zokushisa okuncane kokushisa kanye nokusetshenziswa kwamandla aphansi. Lapho ukuhlanganiswa kokuphilayo kugesi kadoti kungaphezu kuka-2 .5g / m3, akukho ukushisa okungaphezulu okudingekayo komlilo ohlangothini. Ngemuva kokuhlungwa kwento ephilayo kugesi wokukhipha inyuka, inqubo yokushisa yomlilo inganikeza ukushisa emhlabeni wangaphandle.
Umlilo we-Catalytic ungaphatha cishe wonke ama-hydrocarbon organic gas gas kanye nephunga legesi, okungukuthi, kufanelekile ukwelashwa kwegesi ehlukahlukene yemfucuza enobubanzi obuningi bokuhlungwa nokwakheka okuyinkimbinkimbi. Okwegesi kadoti onamanani aphansi, izinto eziningi futhi alikho inani lokutakula elikhishwe embonini yamakhemikhali engokwemvelo, ukumboza, izinto zokuvikela izinto nezinye izimboni, indlela yokushisa amandla omkhankaso we-adsorption inomphumela omuhle wokwelashwa.
TreatmentHigh ukwelashwa kahle, akukho ukungcoliswa yesibili
Izinga lokuhlanzwa kukadoti we-organic nge-catalytic combustion method ngokuvamile liphezu kwama-95%, futhi imikhiqizo yokugcina ayinabungozi i-CO2 ne-H2O (i-heteroatom organic compounds neminye imikhiqizo yomlilo), ngakho-ke akukho ukungcoliswa kwesibili.
Langaphambilini Ikhabethe lokususa uthuli elomile
Olandelayo: Izixazululo Zokwelapha Amanzi Angcolile
ISiphepho Sifutha Umbhoshongo
Izinsiza kusebenza Zokwelashwa Kwegesi Elahliwe
Uhlelo lwe-Voc Waste Gas Treatment
Izinsiza kusebenza zokwelashwa kwegesi
Izixazululo Zokwelapha Amanzi Angcolile